Fitaovana fantsom-panazavana alimina aliminioma mpanamboatra sy mpamatsy - faritra mombamomba ny fantsom-bolan'ny aliminioma Factory
Ny firaka aliminioma dia fitaovana vy tsy ferrous.
Ny firaka aliminioma dia manana hakitroka ambany nefa manana tanjaka avo lenta, izay akaiky na mihoatra ny an'ny vy avo lenta. Manana plastika tsara izy io ary azo zahana amin'ny mombamomba azy isan-karazany. Izy io dia manana fitarihana herinaratra tena tsara, fitarihana hafanana ary fanoherana ny harafesina. Ampiasaina betsaka amin'ny indostria izy io ary ny fampiasana azy dia faharoa amin'ny vy. Ny alika aluminium sasany dia azo tsaboina amin'ny hafanana mba hahazoana toetra mekanika tsara, toetra ara-batana ary fanoherana ny harafesina.
Ny fampiroboroboana ny varavarana sy ny varavarankely vita amin'ny firaka alimina ny alim-baravarankely sy ny varavarankely, ny indostrian'ny rindrina amin'ny ridao dia indostrialy vaovao eto amintsika, manomboka amin'ny voalohany, hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, dia nahavita fandrosoana haingana tamin'ny fihodinana.
Ny firaka aliminioma no fitaovana fananganana vy tsy ferrous be mpampiasa indrindra amin'ny indostria, ary be mpampiasa amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, aerospace, fiara, fanamboarana milina, fanamboarana sambo ary indostria simika. Azo alefa elektrika ny firaka aliminioma.
Ny tanjaka dia tsy azo ampitahaina amin'ny andian-tsarimihetsika 2XXX na andian-dahatsoratra 7XXX, maro ny mampiavaka azy amin'ny magnesium sy ny silikonika. Izy io dia manana fahombiazan'ny fanodinana tena tsara, toetra mampiavaka tsara ny welding ary ny fananana elektrôlika ary ny fanoherana tsara. Kolikoly, henjana avo lenta, tsy misy fivoarana aorian'ny fanodinana, fitaovana matevina tsy misy kilema ary mora polishing, sarimihetsika miloko mora, effet okididra tsara, sns.
Ny firaka alimika anodized dia afaka mamorona sosona oksida mitovy sy matevina eo ambonin'ny vokatra, "(Al2O3, 6H2O mahazatra jade vy)" Ity sarimihetsika ity dia mety hahatonga ny hamafin'ny vokatra hahatratra (200-300HV) ", raha vokatra manokana azo atao mafy Anodizing, ny hamafin'ilay vokatra dia mety hahatratra 400-1200HV, noho izany ny anodizing mafy dia dingana iray fitsaboana tsy maintsy ilaina amin'ny varingarina solika, fandefasana ary ny hafa.
Izay mahalala ny mampiavaka ny aliminioma dia mahafantatra fa ny fiasa simika an'ny aliminioma ao amin'ny firaka dia tena mihetsika, ary afaka mihetsika haingana amin'ny oksizenina eny amin'ny rivotra izy io mba hamoronana sarimihetsika miaro an'ny oksida aluminium.